Cabify waxay ka shaqeysaa Madrid raxantii ugu horeysay ee 40 Mobilize Limo | War Deg Deg Ah
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » War Deg Deg Ah » Cabify waxay ka shaqeysaa Madrid raxantii ugu horeysay ee 40 Mobilize Limo
War Deg Deg Ah • Spain
Cabify waxay ka shaqeysaa Madrid raxantii ugu horeysay ee 40 Mobilize Limo
Cabify waxa ay noqotaa macmiilka ugu horreeya ee caalamiga ah ee Mobilize Driver Solutions, oo ah bixinta furaha oo bixisa shirkadaha Limo sedan iyo adeegyo dhammaystiran oo loo dhan yahay. Mobilize ayaa si gaar ah u soo saartay xalkan-hal-hal ah ee baahiyaha qaybta kor-u-qaadista.
· Heshiiska u dhexeeya Mobilize iyo Cabify wuxuu saadaaliyaa is dhexgalka 40 Mobilize Limo ee kooxda Vecttor, oo hoos timaada kooxda Cabify ee Madrid. Baabuurkan korontadu yahay 100%, oo baaxaddiisu dhan tahay 450 km WLTP, ayaa jawaab ku habboon baahida hadda jirta ee baabuurta aan hawada ka saarneyn ee maraakiibta iyo dadka iskood u shaqeysta ee qaybta.
· Baabuurtan waxa lagu dari doonaa qaybta Cabify Eco, oo ay horeba u heli jireen macaamiisha shirkadaha ee si gaar ah ugu socdaalaya baabuurta korontada Waxa kale oo ay heli doonaan isticmaalayaasha gaarka ah ee qaybaha kale ee Cabify.
Madrid, Maajo 25, 2022– Abaabul, astaanta Kooxda Renault ee u heellan dhaqdhaqaaqa cusub, iyo shirkadda Isbaanishka ee dhaqdhaqaaqa badan ee Cabify, waxay saxiixday heshiis weyn oo u noqon doona guul muhiim u ah qaybta fuulista ee Spain. Natiijadii iskaashigan, Cabify wuxuu noqon doonaa isticmaalaha ugu horreeya ee Abaabulka Darawalnimada wuxuuna ka shaqayn doonaa afartankii ugu horreeyay ee Mobilize Limos adduunka.
Iyada oo la adeegsanayo Xalka Dareewalka Abaabulka ee loogu talagalay xirfadlayaasha goobta gaadiidka rakaabka, Abaabul waxay meesha ka saartaa hubanti la'aanta la xiriirta saameynta helitaanka baabuurka iyo isticmaalka kharashyada dakhliga. Mobilize wuxuu bixiyaa rukhsad furaha si loo helo nabada maskaxda ee ugu badan ee iskood u shaqeysta iyo shirkadaha ay ku jiraan: isticmaalka baabuurka, adeega mudnaanta leh, damaanad qaadka, caymiska, kaalmada iyo dib u dallaca. Kuwani waa xalal dabacsan oo siiya darawallada iyo hawl-wadeennada dammaanadda ugu wanaagsan ee isku halaynta iyo badbaadada looga baahan yahay gaadiidka rakaabka ee magaalada, inta lagu jiro wareegga nolosha baabuurka.
Talaabada muhiimka ah ee lagu dardargelinayo kaarboniistaha dhaqdhaqaaqa
Heshiiskan, oo ay labada shirkadoodba muddo sannad ka badan ka shaqaynayeen horumarinta iyo baahiyaha mashruuca, ayaa ah tallaabo aasaasi ah oo loo qaaday dhinaca dhaqdhaqaaqa. Abaabulka iyo Cabify waxay wadaagaan falsafad isku mid ah raadinta xalalka cusub ee dhaqdhaqaaqa kaas oo gacan ka geysta ujeedooyinka ka-saarista, fududaynta nolol maalmeedka xirfadlayaasha iyo isticmaalayaasha adeegyada gaadiidka.
Abuuritaanka, oo leh Mobilize Driver Solutions, ayaa gelaya suuqa kor-u-qaadista, waa qayb la filayo in ay korto 80% Yurub marka la gaaro 2030. Kani waa suuq u baahan in si degdeg ah oo ballaaran loo 'koronto' si loo hubiyo gelitaanka xarumaha magaalada. , kuwaas oo si isa soo taraysa loogu xidhayo xannibaadaha gaadiidka, oo ay ku jiraan aagagga hawada sii daaya ee hooseeya ee ka soo koraya Yurub oo dhan.
Dhankeeda, Cabify waxa ay horumar ka samaynaysaa himilooyinkeeda kaarboonaynta. 2018, Cabify waxay noqotay madal dhexdhexaad ah oo kaarboon ah oo ugu horraysa qaybteeda. Tan iyo markaas, waxa ay dib u habeyn ku sameyneysay qiiqa sii daaya iyo kuwa rakaabkeeda, iyada oo la kulmeysa ballan-qaadka dhimista qiiqa sannadlaha ah.
Intaa waxaa dheer, shirkadda Isbaanishka ayaa dhawaan soo bandhigtay 2022-2025 istaraatijiyad ganacsi oo waara, hagaha calaamadeyn doona mashaariicda Cabify oo si adag uga go'an la dagaallanka isbeddelka cimilada, iyada oo ujeedadu tahay decarbonising maraakiibta laga heli karo app-ka Spain iyo Latin America. Cabify waxa ay ilaalisaa yoolka ah in 100% safarrada madalkeeda ay ku jiri doonaan maraakiibta korantada ee 2025 gudaha Spain iyo 2030 ee Latin America.
Abaabul Limo waxay si fiican ugu habboon tahay ujeeddada Cabify ee ah kaarbonisiinta maraakiibteeda: 100% baabuur koronto ah oo bixisa jawaab habboon baahida hadda jirta ee ka timid kuwa iskood u shaqeysta iyo darawallada gawaarida ee baabuurta aan siideyn eber kuwaas oo kala soocan, ballaaran, raaxo iyo dhaqaale leh. Iyada oo leh 450 km oo kala duwan (WLTP) iyo wadis xasilloon, qaabkani wuxuu ka dhigi doonaa dhaqdhaqaaqa korantada mid aad u fudud oo ay heli karaan darawallada iyo maareeyayaasha maraakiibta.
Iyada oo afartanka baabuur ee Mobilize Limo lagu daray maraakiibta Vecttor ee Madrid, sii daynta 320 tan ee CO2 sannadkii waa laga fogaan doonaa. Mobilize Limo waxaa laga heli doonaa qaybta Cabify Eco, kaas oo hadda u ogolaanaya macaamiisha 'ganacsiga' inay ku safraan oo keliya baabuurta korantada ah (isku-dhafka, isku-dhafka iyo 100% koronto), iyo sidoo kale qaybaha kale ee isticmaalayaasha gaarka ah, sida sida Cabify, Cuanto Antes ama Kids. Cabify Eco waxaa laga bilaabay Madrid inay tahay magaaladii ugu horeysay, waxaana si tartiib tartiib ah loo ballaarin doonaa.
Madrid, oo ah magaaladii ugu horeysay ee adduunka halkaas oo Mobilize Limo sedan ay geli doonto adeeg
Doorashada Madrid waxay ahayd mid cad oo loogu talagalay labada lammaane: caasimadda suuqa muhiimka ah ee Renault Group iyo magaalada uu ku dhashay goobta dhaqdhaqaaqa Cabify oo ku salaysan.
"Aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ku dhawaaqo heshiiskayagii ganacsi ee ugu horreeyay ee adeegyada dhaqdhaqaaqa oo aan la leenahay lammaane hormuud ah sida Cabify. Iyada oo la adeegsanayo Xalka Darawalka Abaabulka, waxaan rabnaa inaan bixinno xalal kala duwan oo u gaar ah si nolosha loogu fududeeyo gaadiidka dadka. Bilaabida soo socota ee adeegeena gudaha Madrid iyo ka dib Paris waxay noo ogolaaneysaa inaan ku taageerno darawalada xalal cusub oo isku dhafan oo loogu talagalay dhaqdhaqaaqa cagaaran”. Fedra Ribeiro, COO ee Abaabulka
"Waxa kale oo mudnaan leh in magaalada la doortay in la bilaabo Abaabul Driver Solutions waa Madrid: go'aankan, Madrid waxay noqonaysaa magaaladii ugu horreysay ee adduunka halkaas oo adeegga la geyn doono., "ayuu yiri Sebastien Guigues, Agaasimaha Maareeyaha Iberia - Kooxda Renault
"Waxaan ku hanweynahay inaan heshiiskan oo kale la soo gabagabeyno shirkad hal-abuur leh sida Mobilize. Waxaan rabnaa inaan sii wadno inaan siino isticmaalayaashayada iyo macaamiisheena adeeg kala duwan, oo leh tayada ugu fiican iyo dammaanadda, iyo dhammaan iyada oo aan la sii dayn. Waxaan rabnaa inaan safka hore kaga jirno Isbaanishka, labadaba Vecttor iyo inta kale ee maraakiibta aan la shaqeyno.", ayuu yiri Daniel Bedoya, Maamulaha Gobolka Cabify ee Spain. "Waxaan dooranay inaan la shaqeyno Mobilize sababtoo ah waxaan leenahay qiyamka guud waxaanan aaminsanahay inay tahay lamaane aad u wanaagsan oo ku wajahan wadarta koronto.".
Wax badan oo ku saabsan: Europe | Laatiin | Renault | Paris | Spain
Waa maxay sababta Airbus iyo Boeing ay hadda u duulayaan iyagoo wata qalab dheeri ah oo been abuur ah oo lagu rakibay Europe|
Qatar Airways iyo Airlink: Duulimaadyada Afrika ee US, Europe iyo Asia ayaa fududeeyay Europe|
Diyaaraduhu waa kuwo adkeysi leh Europe|
Seychelles waxay ku soo duushay Shirkadda Socdaalka ee furitaanka dukaanka calanka ee NUBA Spain|
Copa Airlines waxay dib ugu soo laabatay cirka Barbados Laatiin|
Europe Laatiin Paris Renault Spain
Calaamada QT ee Hudheelka U imanaya Newcastle ee Australia
Abaalmarinta Dalxiiska Singapore 2022: Wax ku biirinta Inta lagu jiro Covid-19
Walsh: Wax ka beddelka cusub ee EU ETS wuxuu dhaawacay jawiga duulista
Mustaqbalka Dalxiiska marka loo eego Dalxiiska Adduunka...
Duulimaadka cusub ee Saint John-Toronto ee Swoop
Aragtida Suuqa ee Nidaamyada Soo-kabashada Qashinka Qashinka ee APAC iyo...
Waa maxay sababta ay Airbus iyo Boeing ay hadda ugu duulaan alaabada agabka beenta ah...